Farmaajo oo maanta si aan caadi ahayn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho (SAWIRO) - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Farmaajo oo maanta si aan caadi ahayn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho (SAWIRO)
Ra’iisul wasaarihii hore ee dowladii KMG ahayd Soomaaliya haatanna ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Mr. Farmaajo oo saakay kasoo dhoofay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, ayaa garoonka Aadan Cadde waxaa kusoo dhaweeyay dadweyne badan, oo isugu jiray kuwa taageerayaashiisa ah iyo mas’uuliyiinta ololihiisa doorasho gacanta kula jirta.
Ciidanka ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay taageerayaasha Farmaajo u diideen inay galaan gudaha garoonka, inkastoo qaar ka mid ah dadkaasi markii dambe loo ogolaaday inay gudaha galaan.
Inta u dhaxeeysa garoonka Aadan Cadde ilaa hoyga la dejiyay Mr. Farmaajo ayaa maanta waxaa lagu arkaayay dadweyne badan oo ka qeyb qaadanayay soo dhaweyntiisa.
Mr. Farmaajo ayaa la filayaa in xilliyadda soo socdo uu magaalada Muqdidho kaga dhawaaqo inuu u sharaxan yahay xilka madaweynaha Soomaaliya ee dhaceeysa dabayaaqada bishaan December.
Siyaasiga Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa sida la ogsoon yahay taageero badan ka heysta shacabka Soomaaliyeed, inkastoo ay xusid mudan tahay in doorashada sanadkaan aysan shacabka wax dooranayn balse ay dooranayaan xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.